Microsoft ibonakaliswa njengenye inkampani kakhulu software umthengi ebomini. Bekusoloko iinkqubo olungenakuzisa ngokukhululeka kunye lula kubasebenzisi bayo iqalise. Ukuze uhlale uhlobene nehlabathi, ukwenza imiyalezo kunye nokuqhuba ividiyo okanye audio iminxeba, Microsoft liqulunqe lokusebenza layo kakhulu ezisemthethweni eyaziwa ngokuba Skype ngokubanzi abasebenzisi bayo Android.
Ngokutsho kwisaveyi, engaphezulu kwe 250 abasebenzisi million usebenzisa Skype njengesixhobo unxibelelwano lwabo. Ke inani labasebenzisi liyenyuka suku ngalunye ngenxa yokusebenza kwayo kakuhle. Le app ngu-Microsoft ikunceda uqhagamshelo nayiphi na abasebenzisi usebenzisa Skype. Kufuneka nje uqhagamshelo intanethi elungileyo okanye data cellular ukungena kwihlabathi leendibano ka Skype.
phones zakho Android nga akuvumele uthethe nabani ofuna kodwa ngoncedo Skype, unga kwakhona unxibelelwano yokuzonwabisa nabanye abasebenzisi. Le app zabanezidingo ezizodwa kungumceli-Ukongeza kukuguqula kubasebenzisi Android. Ukuba ufuna ukuya sikhokelo epheleleyo ka-Skype kubasebenzisi Android, inkqubo kunye nokusetyenziswa, iimpawu yayo kunye nokhuphiswano uhlangothi lwayo ukugcina ukufunda eli nqaku eluncedo.
Kuthotywa Skype for Android
Unako kwamandla ukufumana le Skype app ophawulekayo kwizixhobo zakho Android ngokulandela amanyathelo alula
Yiya ukudlala ivenkile kwizixhobo zakho Android kunye search Skype okanye download ukusuka link enikwa APHA.
Nqakraza kwi iqhosha Faka ngolayisho nofakelo Skype.
Wakuba abafake uhlelo lwakho, ngoku nqakraza suka abhaliswe kule app
Kufuneka ukuba ufake yakho akhawunti imeyli yaye inombolo yokuvula.
Ungasebenzisa le akhawunti ekhona kodwa ke ukuba awunayo ngoko wenza i enye entsha.
khetha yakho Igama lika-Skype, esetyenziswa wakho Skype ID ukuqala ukubiza.
1.1 Yongeza abafowunelwa & Yenza Call
1.2 Iimpawu ze Skype:
1.3 High-Quality Video & Calls Audio:
1.4 Screen Ukwabelana ku Skype
2.0.1 Edge lokhuphiswano Skype:
3 Skype zonke izixhobo:
3.0.1 Skype zombini iifowuni online ne-offline
3.1 Tsalela On ezifakwe ngokusisigxina & Mobile Phone Numbers Nge Skype:
Yongeza abafowunelwa & Yenza Call
Kuba ngokudibanisa awunabafowunelwa Skype, uya kubona panel ebonisa zonke abasebenzisi abasele abasebenzisa Skype kwaye ezinxulumene kwi-akhawunti yakho ye-imeyile. Enye indlela unako umyalezo okanye nge-imeyile nabani na usebenzisa Skype kwaye ongeze ID zabo Skype ukuqala ubiza omnye.
Ungadibanisa enye zoqhagamshelwano ngokukhetha Dibanisa abantu kwi main menu ka Skype. Unakho ukongeza abasebenzisi ezifunwa ngokubhala nje Skype lomsebenzisi yayo uze nqakaza kwi ukongeza abafowunelwa. Ukongeza kule, ungenza kwakhona wenze uluhlu lwakho ezininzi ezisetyenziswayo ngokongeza zibe Yongeza yakho features ozithandayo xa. Uyakwazi futhi ukuvimba okanye susa qhagamshelana kwemiba zakho zangasese kunye nokhuseleko.
Iimpawu ze Skype:
Skype ngu Microsoft ukukhonza abathengi zalo injongo ezikhethekileyo States bathi Hi ku bonke abantu ehlabathini jikelele.
Olona luvo lungunobangela wesi kukuba ukunciphisa kumgama ibe uxinezeleko-simahla ukuba abantu ukuhlala zihlobene. Oku kuluncedo kakhulu ukuhlala ezidityanisiweyo kunye nosapho lwakho kunye nemibutho zakho xa ungakwazi emzimbeni ungadibani nawo.
Skype inoluhlu elikhulu abathengi yanelisekile. Yonke imihla, izigidi zabantu abasebenzisa Skype ukuba ingxoxo okanye utsalele abanye abantu. Skype linika iimpawu ezikhethekileyo kubandakanya.
High-Quality Video & Calls Audio:
Skype into enengqondo yenzelwe ukuba anike iCEMIS ezikumgangatho ophezulu yevidiyo nomsindo iminxeba iziphumo kubathengi bayo. Nawe crystal ividiyo ecacileyo nomsindo ubiza ehlabathini lonke.
Ingxenye best, Skype unika iziphumo zayo elilelona umgangatho zombini iifowuni enye ukuya kwenye okanye iminxeba iqela. Kufuneka uqinisekise ukuba usebenzisa uqhagamshelwano elungileyo intanethi ukuthintela naziphi na aphazamiseka yakho yevidiyo okanye iminxeba audio.
Screen Ukwabelana ku Skype
Lo msebenzi osemqoka uluncedo kakhulu ezinikezelwa yi-Skype. Ngoncedo lwe Ukwabelana, unako lula ukwabelana ntetho yakho, imifanekiso, amaxwebhu okanye nantoni na ngethuba lokufowuna.
Oku kuluncedo kakhulu ukuze ihlabathi corporate. Abasebenzi bakwazi ukwabelana iifayili zabo kubalulekile okanye amaxwebhu, bonisa ntetho, iinkcukacha zeeprojekthi, analysis ukuziphatha, iimfuno zabathengi kananjalo uyakwazi ukusombulula imiba ngexesha leefowni zabo.
Ukuba ufuna ukufihla ingxoxo yakho okanye ifuna naluphi na ukhuseleko okanye zobuqu izizathu, ke unako ukwenza oku lula nge Skype. Le app sikwazi ukuba nengxoxo yabucala kunye ekupheleni ukuya ekupheleni inkqubo ngemfihlo.
Record iminxeba yakho:
Skype kwakhona ikuvumela ukuba abhale ividiyo okanye komsindo wakho iminxeba. Oku kuluncedo xa ufuna ukubhala nayiphi sigidimi okanye mzuzu. Kwakhona kusiza ekufundeni, ukhangele ubhala phantsi iingongoma oliphosileyo kwi ngexesha iminxeba yakho.
Olu phawu kusebenzela kwicandelo loshishino labucala, ukuba ufuna kwakhona ukuphulaphula izikhokelo yakho umfundisi okanye nomphathi, ungakwenza oko ngokulula ngokubukela kushicilelo calls zakho.
Edge lokhuphiswano Skype:
Skype sele ukhonza abathengi bayo ngaphezu 10 iminyaka. Microsoft ngubani ingxilimbela kule kwimarike kukhuphiswano iye yenziwa le vidiyo app yefowuni isebenza iimpawu ngaphezulu kwezinye okhuphisana ezifana kwexesha ubuso, duo Google, etc. abayi umsebenzi. Esi sesona sizathu sokuba le app ngomnye apps lusetyenziswa ehlabathini lonke. Le eqhelekileyo nokhuphiswano olubandakanya
Skype zonke izixhobo:
Ngokomthetho, Skype yenzelwe umsebenzisi Android kubandakanywa phones Android mobile, amacwecwe Android, kunye nezinye apps Android. Kodwa inxalenye umdla yi Skype nayo inokusetyenziswa kuzo zonke ezinye iimveliso njengoko kuquka kakuhle Microsoft Windows, Linux, Macintosh, Blackberry, nabo bonke tablets Apple kanye Smartphones. Ukuba unayo nayiphi na isixhobo kufuneka nje ukukhuphela Skype kwaye ukonwabela enye zeefoni apps kakhulu interactive imidlalo yokuzonwabisa.
Skype zombini iifowuni online ne-offline
Enye into wokhuphiswano yale Skype app kujoliswe awukwazi kuphela ukubiza abantu intanethi kodwa akwazi ukuba edibene kubantu abangenayo i connection intanethi. Skype yenza isindululo le premium linikeza ukuba abasebenzisi bayo ukuba musa ukubiza amanani mobile kunye neenombolo zefowuni yocingo.
Kuba intanethi iminxeba eziphambili, akunyanzelekanga ukuba ahlawule nantoni na. Konke okudingayo uqhagamshelo yakho intanethi ukubeka umnxeba. Kodwa ngokubiza iinombolo zefowuni okanye iinombolo yasendlini, Skype uwunike ukubhaliswa eyongayo kakhulu kubasebenzisi bayo. Ezinye iinzuzo avelele Skype abasebenzisi yalo
Unako ukufaka iminxeba ukuba usapho lwakho, nabo okanye abahlobo naphi na ehlabathini lonke. Skype linika isicwangciso ubizo kakhulu iindleko-olusebenzayo kumazwe awahlukeneyo ehlabathini lonke.
Ukongeza kubasebenzisi Android, ezi mpawu isebenza kuzo zonke isixhobo kuquka desktop, iPhone, Xbox, OSX kanye neminye
Skype ivumela abaxumi zayo iindlela ezininzi ukuhlawula imirhumo kubandakanya Visa, ikhadi Master, JCB, PayPal, Ivenkile, Apple In-App Ukuthengwa, express american, Western Union kunye ezininzi
Le nkqubo Kulula kakhulu. Wena nje kufuneka ahlawule umrhumo, abese ukulanda le app Skype kwaye uqale aphikisane ividiyo zeefoni best software.
Tsalela On ezifakwe ngokusisigxina & Mobile Phone Numbers Nge Skype:
Ukwenza iminxeba Skype-to-ndlini kwi Skype ngokusebenzisa ifowuni yakho Android kuya kufuneka wena Skype credit.
Click on the Skype credit link ukongeza Skype ngetyala kwi-akhawunti yakho.
Ukuba ngaba awunayo Skype ngetyala kwaye uzama ukwenza Skype-to-ndlini call, Skype will send you a pop-up to top-up your account.
Ungakwazi noba ufumane Skype umrhumo wenyanga okanye phezulu-ukuya usebenzisa iintlawulo olunye-off.
Misa i umrhumo wenyanga, ukuba Skype isetyenziswa iminxeba yakho ngemihla ngamazwe. You will need a debit card for the subscription process.
Choose the amount of Skype credit you would like to add and Nqakraza ku 'Qhubeka'.
Nqakraza kwi iibhokisi ezingenanto kwaye uqala ngokugcwalisa iinkcukacha zakho billing ebhalisiweyo ukuba ikhadi lakho debit.
Ukuthenga ngetyala lakho kwaye ukulungele ukusebenzisa i Skype.
Ngoku uye wathenga Skype credit ungaqala obiza amanani ndlini okanye neselula.
Ukuqala, click on the phone icon njengoko kubonisiwe ngezantsi apha umfanekiso.
Ukutsalela inombolo ofuna ukuba uthethe ukudibanisa ikhowudi ye zamazwe ngamazwe kunye Nqakraza ku Call Button.
Hang up xa kwenziwa nekhwelo yakho.
Ukuze ufake Cofa yasendlini kwi 'Yongeza inombolo' then enter the landline number you wish to add to your list.
Ngethemba ukuba sele efakiwe le app Skype ngempumelelo. Ukuba nayo nayiphi na ingxaki, imenyu udaba lwakho kwibhokisi izimvo. imibuzo yakho iza kusonjululwa ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka. Landela onke amanyathelo ukugcina nomonde, you will surely be able to use Skype very easily.